Ernesto Valverde Iyo Kooxdiisa Barcelona Oo Kulamo Waali Ahi Ay Sugayaan Bishan September Iyo Bilaabashadii Liidatay Oo Walwal Ku Ah Blaugrana. - Gool24.Net
Ernesto Valverde Iyo Kooxdiisa Barcelona Oo Kulamo Waali Ahi Ay Sugayaan Bishan September Iyo Bilaabashadii Liidatay Oo Walwal Ku Ah Blaugrana.
September 9, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Barcelona ayaa gali doonta jadwal waali ah bishan September marka laga soo laabto kulamada caalamiga ah ee hadda socda. Barcelona waxay ciyaari doontaa kulamo saamayn wayn ku yeelan kara hanaanka xili ciyaareedka kooxdeeda.
Barcelona ayaa afar dhibcood oo kaliya ka soo shaqaysatay saddexdii kulan ee ugu horeeyay La Liga waxayna haddaba is arkayaan iyaga oo 5 dhicbood hoos uga dhacay kooxda kaalinta kowaad ku jirta ee Atletico Madrid.
Ernesto Valverde ayaa wali ka walwalsan dhaawacyada kooxdiisa Barcelona laakiin waxaa u soo socda kulamo badan oo ay qaarkood aad u adag yihiin taas oo qeexi karta sida ay xaalada Blaugrana noqon karto.
Barcelona waxaa sabtida sugaya kulanka adag ee ay Camp Nou ku soo dhawayn doonto kooxda Valencia oo ka mid ah kooxaha dhibta badan ee horyaalka La Liga, waana kulan uu Ernesto Valverde cadaadis badan dareemi doono haddii ayna kooxdiisu guul gaadhin.
Kadib waxay Barcelona isla talaadada todobaadka soo socda booqan doontaa kooxda Borussia Dortmund waana kulanka furitaanka heerka groupyada Champions League.
Waxa kale oo isla bishan ay Barcelona la ciyaari doontaa kooxaha Granada, Villarreall iyo Sevilla oo ay bishan ku soo xidhan doonto taas oo jadwalka Barca ka dhigtay mid waali ah.
Waxa uu Valverde imtixaan adag ku mari doonaa kulamada Valencia, Borussia Dortmund, Villarreal iyo Sevilla taas oo la micno ah in ay Barca bishan ciyaari doonto afar kulan oo dhamaantood heerka ugu saraysa looga baahan doono in ay ku ciyaarto.
Haddii ay Barcelona dib u hesho Lionel Messi iyo Luis Suarez waxay culays badan ka dul qaadi doonaan Valverde oo kulamadii xili ciyaareedkan ay kooxdiisu soo dhibtoonaysay.